ကလေးမြား အာသီးရောငျသောအခါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
● မေးရိုးအောကျတဈဝိုကျ အကြိတျမြားပျေါပွီးနာခွငျး
● နုံးခြိခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဗိုကျနာခွငျး
>> ဘယျအခြိနျမှာ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသရမလဲ?
● အသကျရှူရခကျလြှငျ (အိပျလြှငျ ဟောကျသံကယျြကယျြလာလြှငျ)
● ပါးစပျဟဖို့ ခကျခဲနလြှေငျ
● အာသီးပွညျတညျနာနဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖြားနာလြှငျ
(အမြားအားဖွငျ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးကွောငျ့ အဖွဈမြားတဲ့အတှကျ ပိုးသတျဆေးမလိုတတျပါဘူး။ ရောငျရမျးမှုကွောငျ့ မြိုခရြခကျနရေငျ အရောငျကဆြေးပေးတတျပါတယျ။)
● ပါရာစီတမောပါတဲ့ ဆေးဝါးမြား တိုကျလို့ရပါတယျ။
● ပြော့ပြောငျးတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ကြှေးပါ။
● တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးကို ဂရုစိုကျပါ။
● တဈကိုယျရညျသုံးပစ်စညျးမြားကို မြှဝသေုံးစှဲခွငျးမှ ရှောငျကွဉျပါ။
● ခြောငျးဆိုး၊ နှာခလြှေငျ တံတောငျဆဈကှေးထဲသို့ မကျြနှာကိုအုပျပွီး ဆိုးပါ။
● လကျကိုငျပဝါအစား တဈခါသုံးတဈရှူးကို သုံးပွီး စနဈတကြ လှငျ့ပဈပါ။ ပွီးလြှငျ လကျပွနျဆေးပါ။
အာသီးဆိုတာ အာခေါင်ရဲ့နောက်နားကျကျမှာရှိတဲ့ glands (အဖုအကျိတ်များ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာသီးတွေဟာ ခံတွင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်း ရှိကြပါတယ်။ အာသီးရောင်ခြင်းဟာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
>> အာသီးရောင်သည့် လက္ခဏာများ
● မေးရိုးအောက်တစ်ဝိုက် အကျိတ်များပေါ်ပြီးနာခြင်း
● နုံးချိခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း
>> ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသရမလဲ?
● အသက်ရှူရခက်လျှင် (အိပ်လျှင် ဟောက်သံကျယ်ကျယ်လာလျှင်)
● ပါးစပ်ဟဖို့ ခက်ခဲနေလျှင်
● အာသီးပြည်တည်နာနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖျားနာလျှင်
(အများအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် အဖြစ်များတဲ့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးမလိုတတ်ပါဘူး။ ရောင်ရမ်းမှုကြောင့် မျိုချရခက်နေရင် အရောင်ကျဆေးပေးတတ်ပါတယ်။)
● ပါရာစီတမောပါတဲ့ ဆေးဝါးများ တိုက်လို့ရပါတယ်။
● ပျော့ပျောင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကျွေးပါ။
● တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
● တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းများကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
● ချောင်းဆိုး၊ နှာချေလျှင် တံတောင်ဆစ်ကွေးထဲသို့ မျက်နှာကိုအုပ်ပြီး ဆိုးပါ။
● လက်ကိုင်ပဝါအစား တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးကို သုံးပြီး စနစ်တကျ လွှင့်ပစ်ပါ။ ပြီးလျှင် လက်ပြန်ဆေးပါ။